Abaningi abantu bakithi unesithakazelo Impendulo yombuzo izivakashi Russian angahamba visa-free kunoma yiliphi izwe. Iqiniso lokuthi inqubo visa, ngokuvamile akuyona into emnandi kakhulu. Ezweni lethu, ngakho kukhona bonke ubunzima bureaucratic ngokweqile e ukubhalisa imibhalo ehlukahlukene. Amazwe umbuso visa-free njengoba ukuheha abavakashi, nje ngoba asikho isidingo kuphazamise ukulindela travel idokhumenti yokudla. Udinga ukufakazela ikhono lazo ukukhokha, bese umane bayethe ngaphandle kokwazi kunqatshelwe noma cha. Ochwepheshe baye bame kwelokuthi lizwe ukuvakashelwa visa-free ngokuvamile ukuheha izivakashi ezingaphezu kuka lezo visa liyadingeka. Ngokuqinisekile iningi wazi ukuthi kukhona amazwe lapho inqubo yokuthola i-visa - kuba nje ukugcina icala, futhi angakwazi ukuba kudlule kuye esikhumulweni sezindiza.
Uma ucwaningo eningiliziwe ngale ndaba, uzothola ukuthi kukhona abaningi njengoba 90 amazwe visa-free, abangakwazi ngokukhululekile faka abaseRussia, noma ukuthola i-visa ngaphandle kokulibala ngqo ekufikeni ngokuphelele mahhala noma ethile. Yiqiniso, lesi sibalo sihlanganisa emazweni CIS, okuvame ukubangela bengenandaba anjalo okukhulu njengoba European noma Afrika. Kodwa ngaphezu kwakho konke amazwe visa-free ivezwa kuphela kuleli zwekazi lase-Asia.
Izwe ngalinye has izici zayo siqu ye-visa-free umbuso. Ngezinye izikhathi futhi kwenzeka ukuthi ukuthola i-visa ekufikeni akukho lula kunaleyo uma wenza ke ekhaya ngenyanga ngaphambi uhambo. Ngokwesibonelo, uma ufuna ukuthola i-visa, lapho efika e Qatar ke okokuqala kufanele uthole ukugunyazwa okuvela Ministry wendawo Wezangaphakathi.
Ngokuvamile emazweni visa-free umbuso, noma uma udinga ukuba uthole it right ekufikeni, kubalulekile ukuba ubufakazi ukuthi une ukubhuka ehhotela, amathikithi for ukuthatha uhambo olubuyela emuva, kanye ukufakazela ukuthi wena kuphela. Kukhona amazwe lapho nje Okusemthethweni, kodwa kungase kwenzeke ukuthi ngokuqinile ucele zonke izinto ngenhla.
Lapho esendleleni eya Tunisia futhi kungabi kahle ukuze ufunde mayelana esithile esisodwa. Unelungelo ukuba kuleli zwe ngaphandle visa, kuphela uma landizela indiza ngqo abavela eRussia nase-ezidingekayo ingxenye tour iqembu noma inhlangano ehleliwe, hhayi izinsuku engaphezu kuka-30.
South Korea Ubuye babhekwa yayo. Ukungena ezweni ngaphandle visa ungakwazi kuphela efika esiqhingini Jeju ebhanoyini oqondile. isiqalo Landelayo nezimangaliso ngempela: uma ufuna ukungena kuleli zwe ngaphandle visa izinsuku ayisekho eyi-15, lokhu kwenzeka kuphela uma uye lapha okungenani izikhathi ezine past 2 iminyaka noma izikhathi ezingu-10.
Vakashela i-visa-free zwe futhi kungasiza Schengen visa. Ngalo, ngaphandle imicikilisho ezingadingekile, uzokwazi ukuvakashela eMakedoniya nase-Albania. Futhi emazweni athile aye anquma ukuhlala nje lula inqubo zangaphambi visa. Ngokwesibonelo, eMexico ubike ukuthi abaseRussia kuyoba ukhululekile isicelo visa nge-Internet. Ukuze wenze lokhu udinga uvakashele kuphela iwebhusayithi Embassy sika, ugcwalise yonke imiqulu edingekayo futhi impendulo kuyakufika kuwe nge-imeyili.
Ngaphandle kwalokho, kuyinto evamile, lapho abaseRussia babeyiqembu e siqiniseka ngokugcwele ukuthi izinkinga ne entry asivelanga kuphela esikhumulweni sezindiza wahlangana enyukubele esiqinile umngcele onogada, ngubani uthi ngizwe nokuzitika izakhamuzi Russian. Ngakho, phambi kwakho, ukuya kunoma yiliphi izwe ukuqhuba uphenyo olunzulu futhi uqiniseke ukuthi ibhekisela ngokuqondile visa-free.
Ngokwazi emazweni angaphandle abanalo amazwe visa-free, lapho ngaphansi kwezimo ezithile, ungakwazi ngokukhululekile faka. Ngokwesibonelo, Guatemala, e-El Salvador, Fiji, ePhilippines, Honduras, Colombia, eTunisia, eSyria nabanye.
Okwamanje, nezingxoxo ngaphansi indlela nge Turkey naseSpain ngendaba travel visa-mahhala baseRussia. Ngakho-ke, uhambo akunzima kakhulu.
Indlela ukuze alulame iphasiwedi kanye ofunda
Ski zokungcebeleka Karelia. Incazelo lokuzijabulisa ebusika